महारानी शैलीले राजधानी अस्तव्यस्त
राष्ट्रपतिको सवारीको शैलीले राजधानीबासीलाई सास्ती दिन थालेको छ । लोकतन्त्र भन्ने लोकको हित अहित, लोकआवाज पनि नसुन्ने प्रवृत्ति गलत हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, पद हो र राष्ट्रको संरक्षक पनि । संरक्षकले नागरिकलाई दिनसम्मको सास्ती दिनु गलत हो, आलोचित कार्य पनि हो । यो नकाम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले फेरि पनि दोहोर्‍याइन् ।
राष्ट्रपतिले रिसल्लाको लर्को लगाएर महारानीको सवारी चलाएजस्तो चलाउनु र घण्टौं ट्राफिक सुनसान पारेर हिड्ने कार्य कदापि प्रशंसनीय होइन, यस्तो कार्यलाई स्वयम् राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्छ र सुरक्षा निकायलाई उचित निर्देशन दिनुपर्छ । होइन, उनलाई खतरा छ भने यसरी रिसल्लाको वीचमा हिड्ने सौख गर्नु किन ? जनतालाई पीडा दिनु किन ?
कसैले उपचार पाएनन्, एम्बुलेन्स पनि रोकिए । जरुरी काममा जानेहरु अड्किए । कतिलाई केकस्तो अप्ठेरो पर्‍यो त्यो राष्ट्रपतिलाई मतलवै भएन । यस्तो संवेदनहीनताले राष्ट्रपतिलाई धृतराष्ट्र चरित्रवाली बनाउँछ ।
हामीले धृतराष्ट्रको शासन खोजेको कि लोकतन्त्र ? लोकतन्त्रमा लोक आवाज संवोधन हुनुपर्छ, धृतराष्ट्र शैली बर्जित हुनैपर्छ । फेरि दोहोरियो यो शैली । राजा फालेर महारानी स्थापित गरेको हो भने छुट्टै कुरा । अन्यथा राष्ट्रपतिका यस्ता क्रियाकलापमा ब्रेक लाग्नैपर्छ । यो सह्य विषय होइन ।
राष्ट्रपतिले सम्मान आर्जन गर्ने हो, घृणा उब्जाउने होइन । राष्ट्रपति शितल निवासबाटनिस्केर संसद भवनसम्म पुग्न बढीमा १२ मिनेट लाग्छ तर घण्टाभरि सडक सुनसान गराएर गर्न खोजेको के हो ? आमनागरिक आक्रोसित छन् ।
सर्वसाधारणले गरिखान पाउनुपर्छ, आफ्नो व्यवहार चलाउन कसैले बन्देज अथवा अप्ठेरो पार्नु हुन्न । अव्यवहारिक काम गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो सौख त पूरा गरिन् होला तर जनआस्था आर्जन गर्न सकिनन् । उनको आलोचना तीब्र रुपमा बढेर गएको छ ।
बग्गी राष्ट्रपतिले चढ्ने होइन । यो त राजर्षी सौखको विषय हो । फेरि राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई बग्गी चढ्ने रहर किन ?
राष्ट्रपति संसद भवन पुगिन्, फर्कदा फेरि जनताको सास्ती उस्तै ।
अव जनतालाई सास्ती दिन रोकिनुपर्छ । जनतालाई सहज र सुशासन दिने हो, बग्गी चढेर अप्ठेरोमा पार्ने काम राष्ट्रपतिले बन्द गर्नुपर्छ ।
संसद पुगेर सरकारले दिएको नीति भाषण गर्दा राष्ट्रपतिले भनिन्– भ्रष्टाचार, दमन र उत्पीडन अन्त्य गर्न आह्वान गर्दछु । जनताले पाएको यो उत्पीडन अत्याचार हो कि होइन ?
र, राष्ट्रपतिले समुन्नत समाज निमार्णको अभियानमा लाग्न सबैलाई आह्वान गरिन् । ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान जारी भइ मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको बताइन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि भएका तीन तहका निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनसँगै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ढोका खुला गरेको छ । हामीमाझ असाधारण सम्भावनाको ढोका खुला छ, समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको हाम्रो अभियान सफलता प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढाएको छ ।
राष्ट्रपतिले जे बोलिन, उनको शितल निवासदेखि बानेश्वरसम्म आवत जावतले लोकमाथि गरेको अपमानबाट आफैले काटिन् । यस्तो स्थिति आउनु भनेको राष्ट्रपति पद रसंविधान, सरकारको नीति वक्तव्यसमेतको बर्खिलाप हुनगयो ।
योभन्दा ठूलो बिभेद के हुन्छ ? राष्ट्रपति इलिट र लोकमाथि अपमान । यस्तो चालाले लोकतन्त्र बलियो हुनसक्दैन । विद्या भण्डारी महारानी बनिन्, जनताको मतबाट बनाइयो, जनताकै मतको अवमान्ना ? यो राजनीतिक र पदीय भ्रष्टाचार, लोकघात पनि हो, स्मरण रहोस् ।
बरु जनता कर तिर्न तैयार छन्, राष्ट्रपतिको आवतजावत हेलिकोप्टरबाट गरियोस् । सडक जाम गराएर तमासा देखाउन राष्ट्रपतिलाई बन्देज लगाइयोस् । ताकि नागरिकले आफ्नो काम, आवतजावत सहज रुपमा गर्न पाउन्, असिन पसिन भएर जाम भएर सडकमा कुच्चिएर बस्नु नपरोस् । राष्ट्रपतिले सोच्न जरुरी छ ।